Nepal Mamila | महिलालाई किन लाग्छ धेरै रक्सी ? यस्तो छ कारण - Nepal Mamila महिलालाई किन लाग्छ धेरै रक्सी ? यस्तो छ कारण - Nepal Mamila
महिलालाई किन लाग्छ धेरै रक्सी ? यस्तो छ कारण
एजेन्सी– महिलाको तुलनामा पुरुषले धेरै रक्सी पिउने संसारभरी मान्यता छ । एक अध्ययन अनुसार महिलाको भन्दा पुरुषले दोब्बर रक्सी पिउँछन् ।
तर, अब यी भनाइ पुराना हुँदैछन् । किनभने सन् १९९१ देखि २००० बीचमा जन्मेका महिलाले आफ्ना पुरुष साथीले जत्तिकै रक्सी पिइरहेका छन् ।
यसको नकारात्मक असर देखिन सुरु भइसकेको छ । अमेरिकी सरकारी आकडाका अनुसार सन् २००० देखि २०१५ को बीचमा ४५ देखि ६४ वर्षका महिलाको सिरोसिसका कारण मृत्युको संख्यामा ५७ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ । सिरोसिसका कारण मर्ने पुरुषको संख्या २१ प्रतिशत रहेको छ ।
यस्तै २५ देखि ४४ वर्ष उमेरका महिलाको सिरोसिसका कारण मृत्युको संख्यामा १८ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ । सिरोसिसका कारण मत्यु हुने पुरुषको संख्यामा १० प्रतिशतको कमी देखिएको छ ।
तर, समस्या यतिमात्र होइन कि महिलाले धेरै रक्सी पिइरहेका छन्, वास्तविकता यो हो कि महिलामाथि रक्सीको असर पुरूषको तुलनामा भिन्न तरिकाले भइरहेको छ ।
वैज्ञानिकका अनुसार महिलाको शरीरबाट निकै सीमित मात्रामा अल्कोहल डिहाइड्रोगेनेज (एडीएच) इन्जाइम निस्कने गर्छ । कलेजोबाट निस्कने यो इन्जाइमले शरिरमा अल्कोहललाई तोड्ने काम गर्छ ।
जो महिला धेरै रक्सी पिउँछन् उनीहरुमा पुरुषको तुलनामा रक्सीको लत र मेडिकल समस्या धेरै हुन्छ । यसलाई टेलिस्कोपिङ भनिन्छ – अर्थात् महिला पुरुषको तुलनामा निकै ढिला रक्सी पिउन शुरु गर्छन् तर चाँडै नै त्यसको आदतमा बस्न थाल्छन् ।
यतिमात्र होइन, महिलामा कलेजो र मुटु रोगसम्बन्धि रोगको आशंका पनि धेरै हुने गर्छ । पुरुषको तुलनामा रक्सीले महिलालाई पुर्‍याउने असरबारे एक दशक अघिसम्म त्यति जानकारी उपलब्ध थिएन किनभने यस्ता अध्ययन रक्सी पिउने पुरुषमाथि मात्र गरिन्थ्यो ।
यसरी गर्न सकिन्छ पसिना गन्हाउने समस्या समाधान